Ukuqeqesha nge-Odorless Maggot Cultivation e-99 City • I-Yurie BSF
Ukuqeqeshwa kokulima kwe-Magorous Odorless ku-99 City
Yurie | Feb 16, 2019 | Ukuqeqeshwa kokulima ukulimala okungajwayelekile
E ukuqeqeshwa ++ Ukukhiqiza kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kokuqeqeshwa kwe-Odor
BSF Ukulima okungenasiphelo samanje ukuqeqeshwa kokuqeqeshwa ++ kuphela. okuqinisekisa ukuthi uphumelele. Konke okufundiswa ukuqeqesha ++ ukuqeqeshwa ukulima umlingo Ungalanda ngokusebenzisa uhlelo lwe-Yurie BSF ku-PlayStore. Ukuqeqeshwa kokulima kwe-BSF no-Yurie BSF Ungakhetha indawo eseduze kakhulu yomkhuba edolobheni lakho. Ngenxa yokuqeqeshwa Izinkomo ze-Maggot ++ Futhi unelungelo lokuzijwayela emapulazini e-Yurie BSF asakazeka emadolobheni amaningi ku-99 kulo lonke elase-Indonesia. BSF ukuqeqeshwa kwemfuyo okungenasiphelo futhi ihlolwe ngempumelelo.
Landa isicelo se-Yurie BSF
Inqubo Yokuqeqesha Ama-Odorless Maggot
Kusukela kuwe ukubhalisa
Khona-ke uzonikezwa ukufinyelela kwesicelo se-Yurie BSF ku-PlayStore
Uyomenywa futhi ukungena eqenjini eliyimfihlo FB isiko lanamuhla ngaphandle iphunga
Ukulethwa kwezimpahla zokusebenza kuthunyelwe amahora angu-2x24 ngemuva kokubhaliswa
Ukulethwa kwembewu, amaqanda ama-larva ahlelwe ngokuvumelana nokulungela
Unelungelo lokuqhuba insimu kwenye yefama ye-Yurie BSF
Isiqondiso emva kokusebenza kwenkambu kwenziwa kuze kube yilapho uphumelela
Ngaphambi kokujoyina, kufanele ubhaliswe ngokuthumela ubufakazi bokukhokha ngemali yokuqeqesha ngokusebenzisa ukudluliswa kwebhange le-BRI.
Futhi uzocelwa ikhophi yekhadi le-ID njengamarekhodi okuphatha.
Yurie BSF Ukufinyelela Isicelo
Ngemuva kokuthumela ubufakazi bokudluliselwa, uzothola iphasiwedi ekhethekile ukuvula isicelo se-Yurie BSF ku-playstore.
In isicelo se-Yurie BSF i-playstore isilungisiwe:
Izincwadi ezintathu zokuqondisa izinkolelo nezenzo
Isifundo sokulima okungenasici
Ifomu yenza i-maggot pasta
Ukusetshenziswa kwamagciwane e-organic fertilizer (POC) kumagatsha ahlukahlukene kanye nezitshalo zezithelo
Ukusetshenziswa okulungile kwesimanyolo esiqinile somanyolo
Ngemuva kokuthola ukhiye wephasiwedi, kufanele uvule, ulande futhi ubuke ividiyo yomkhuba noma ngabe ukuphi uma nje uxhumano lwe-intanethi.
Isicelo se-Yurie BSF sikhulu kakhulu ngoba kunamavidiyo amaningi namadokhumenti kuwo, kodwa ngobuchwepheshe obuphambili, umphumela wokuphela kwesicelo uba lula ku-16MB.
Silungiselele lesi sikhungo esiphezulu ukuze isicelo se-Yurie BSF singalandwa ngisho nhlobo uhlobo lwamafoni omdala.
Joyina iqembu eliyimfihlo
Isinyathelo sakho esilandelayo sizomenywa ngokuqondile ukungena eqenjini le-fb lezimfihlo ze-BSF ukulima ukutshala ngaphandle kokuhogela.
Ku-FB iqembu eliyimfihlo yesimo samanje se-BSF ngaphandle kokuhogela kuhlukaniswe ngamazinga amathathu, okungukuthi
Kuleli qembu uzohlangana nabo bonke abahlobo baka-Yurie BSF kulo lonke elase-Indonesia. Batshela okuhlangenwe nakho kwabo futhi bakha imiphakathi emizini yabo.
Sicela uxoxe nge-adab ehloniphekile. Sizokwenza ngokuqinile "amahlaya" okungekho endaweni nezinto ezingenzi lutho ngokuzilimaza okuphumelelayo i-maggot BSF i-odorless.
Lokhu kuhlukaniswa kwezinga kuhlose ukwenza zonke izihlobo zikaJurie BSF zigxilise kakhulu emisebenzini yansuku zonke yokulima umlingo.
Ezingeni ngalinye uzoqondiswa umeluleki oyedwa noma ababili abaphumelele. Ngakho lokho okuhanjiswayo kungumphumela womkhuba akuyona inkolelo yesilingo nesiphambeko.
Ephaketheni ngalinye elithengiwe, uzonikezwa izimpahla zokwenza kwakho ekhaya kufaka phakathi imbewu, amaqanda, i-larva nezinye izinto zokusebenza ezisekelayo.
Le phakheji ihlukaniswe ngezigaba ezimbili, izinto ezingapheli nezinto eziphilayo. Izigaba ezingenakuphila zizothunyelwa amahora angu-2 x ama-24 ngemva kokuthola ubufakazi bokudluliselwa,
Izigaba zezinto eziphilayo ezifana nembewu, amaqanda, izibungu njll zizothunyelwa ngokusho kwakho. Lokhu kuhloswe ukuze izinto ezithunyelwe bukhoma zitholwe ngemuva kokuthi ukulungele kuqedile.
Ubufakazi bokulethwa kwezimpahla kusuka ensizakalweni yezinsizakalo esizikhetha ngendlela yamaresidi ozothola ukuze uhlole ukuthi ukuthunyelwa kuphi.
Ngemuva kokukwazi ukulanda uhlelo lokusebenza futhi ufunde ngokwakho futhi ujoyine iqembu, kufanele ufunde ukuqhuba ngokuqondile kwenye yefama ye-Yurie BSF esakazeka ngaphezu kwamadolobha e-99 kulo lonke elase-Indonesia.
Uzoqhutshwa ibhomu ngumqeqeshi osevele eqeqeshwe futhi uthola isitifiketi sokulima kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kokuhogela. Ngakho uzofunda into efanayo.
Lokhu ngokuqinisekile kukuzuzisa ukuba usebenzise ngokuqondile edolobheni eliseduze. Ngenxa yokuthi ibanga seliseduze, akudingeki ukhokhe imali enkulu yokuthutha, amathikithi ezindiza, izindleko zokuhlala zokuhlala kanye nesikhathi nazo ziguquguquka.
Indawo yokusesha 10 km25 km50 km100 km200 km500 km
Ngemuva kwenqubo engenhla, usazohola isiqondiso kuze kusebenze.
I-maggot yakho izothengwa ngu-Yurie BSf we-Rp7.000 / kg. ngakho asikho isidingo sokukhathazeka ngokufuna ukumaketha futhi.
Kodwa uma ungafuni ukuthengisa ku-Yurie akukhathaleki noma. Ukhululekile ukunquma ukuthi ufuna ukuphi thengisa i-maggot- i-bug.
Ngokushesha umsebenzi wokulima umlingo ongenasici uveza ama-maggot amaningi. Uma ukhuthazela ukuthengisa umgogodla ku-Yurie BSF.
Sinikeze isikhwama sosizo somngane we-Rp100.000.000, - ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwemagog.
Ungaxhumana ngqo nabaqondisi abaqeqeshiwe
Ukufunda kuhlangene nokuqeqeshwa nokungaxhunyiwe ku-intanethi (field practice) kungaba noma nini nanoma ikuphi lapho uthanda khona. Ungalanda ngisho nezindaba.
Indlela yokulima imifino evinjiwe ihlolwe ngempumelelo futhi ijabulela izinkulungwane zabangani baka-Yurie BSF
Izinto zokulima zihlale zibuyekezwa njengoba kudingeka
Ukubonga kusuka kwabahlanganyeli abaqeqeshwayo kithi ngesimo sobufakazi bevidiyo kanye nobufakazi bangempela ongabona bukhoma esiteshini se-YouTube u-Yurie BSF.
Iyini intengo yephakheji yokuqeqesha?
Uqeqesho lokuqeqeshwa ++ alukhokhi noma lukhululekile, konke okukhokhayo yiphakheji. Inani lentengo yephakheji kusuka ku-Rp100.000-Rp4.000.000 kuye ngokuthi iphakethe oyikhethayo.
Ingabe kufanelekile abaqalayo?
Kuhle kakhulu. Ngoba indaba yokuqondisa yezincwadi namavidiyo wokufundisa kwenziwa kancane kancane kusuka ku-zero ukuze iphumelele. Kumele ukhethe iphakheji yokuqeqeshwa e + yokuqeqesha + njengoba kudingeka.
Ingabe zonke izinkokhelo zingenziwa kanye?
Cha. Iphakethe lezimpahla ezithengwayo lihambisana nokugxila kokuqukethwe okuthengayo.
Ingabe isifundo singalandwa?
Yebo, ungalanda imodemu yedokhumenti.
Joyina manje namanye ama-2000 ++!
Xhumana nathi tel / WA 0812-2105-2808
Ukubingelela SINDISA futhi UHLULE UMONI WAMI
Awekho okuthunyelwe okuhlobene!
Izihloko ezihamba phambili 2019
I-10 Yurie Uhlelo lwe-Success BSF
99 Indawo ye-BSF Maggot Farm
Thenga futhi uthengise i-Maggot BSF nendlela yokuthengisa iMaggot
Izimali Zokukhulula Abangane
isikhwama sosizo lokulima umlingo
Joyina umphakathi weMaggot ngaphandle kokuHlonipha
Ikheli le-imeyli *
ukulima umlingo ukulima umlingo ukuze kungabi iphunga izimpethu I-catfish yase-Afrika ukutshalwa kwesosha elimnyama lezindiza Indlela yokulima i-Maggot ye-BSF ukulima umlingo ngaphandle kokuhogela ukutshalwa kwemithombo yamanzi emaggot ukutshalwa kwegaggot elinogesi ukulima kwemaggot nge-em4
Hambayo: ifeksi: imeyili: